नेकपा विवादः अब पुस्तान्तरण गर्न जरुरी छ, नेतृत्वका लागि दोस्रो पुस्ता तयार हुनुपर्छ: विष्णुप्रसाद रिमाल - Nepal Page Nepal Page
नेकपा विवादः अब पुस्तान्तरण गर्न जरुरी छ, नेतृत्वका लागि दोस्रो पुस्ता तयार हुनुपर्छ: विष्णुप्रसाद रिमाल
लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलतासँगै नयाँ संविधान जारी गरिएपछि मुलुकमा स्थिरता र समृद्धिका लागि जनादेशप्राप्त सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको नेतृत्व तहमा उत्पन्न पछिल्ला विवादले राजनीतिक क्षेत्र परिदृश्य तातिएको छ । कार्यकर्ता तहमा घर झगडाकै कारण पार्टी कतै विभाजनमा पुग्ने त होइन भन्ने संशय उत्पन्न भएको छ । गत निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका माध्यमबाट करीब दुई तिहाइको जनादेशपछि जनभावनानुसार एकताबद्ध नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित सचिवालयका पाँच सदस्यका असन्तुष्टि र आरोपपत्र सार्वजनिक भएपछि अब हुने सचिवालयको बैठकमा अध्यक्ष अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गर्ने जवाफलाई प्रतीक्षाका साथ हेरिएको छ । यसै सन्दर्भमा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अशं :
दोस्रो पुस्ता कुनै गुटभन्दा माथि गएर नेतृत्व लिन तयार छ ? यो अबको बहसको विषय हो । तत्कालीन एमालेमा पार्टी वा सरकारको कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालसम्म रहन पाउने भन्ने विधि बनाइएको थियो । साथै सक्रिय राजनीतिका लागि ७० वर्षे उमेर हदबन्दी पनि थियो । विगतमा मैले नेतृत्व गरेको ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफन्टमा त ६० वर्षे उमेर हदबन्दी कार्यान्वयन भएको थियो । नेकपा गठनपछि ती प्रावधान हटाइए । अबका दिनमा पुस्तान्तरण गर्न जरुरी छ, दोस्रो पुस्ता तयार हुनुपर्छ । यसको छिनोफानो महाधिवेशनले गर्नेछ ।
विभिन्न नियुक्ति गर्दा विषयगत ज्ञान र क्षमतालाई आधार बनाइएको हुन्छ । त्यसमा प्रधानमन्त्रीका आफन्त छन् भने मिडियाले नै खोजेर बाहिर ल्याउँदा हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले पनि यसमा चुनौती नै दिनुभएको छ । अब सामाजिक सञ्जाल खोतलखातल पारेर हेर्ने काम हाम्रो होइन । क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी दिने हो । कसको विरोधी को हो भनेर हेर्दै जाने हो भने प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव खल्तीमा बोकेर हिँड्नेलाई के गर्ने त र ?
सीमा समस्या समाधान भएर प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियता बढ्दा पार्टीको पनि लोकप्रियता बढ्ने होइन र ? अहिले अमेरिकाका विदेशमन्त्री माइक पोम्पियो कुनै बेला यहाँका खुफिया एजेन्सीका निर्देशक थिए, अनि के उहाँ आएर भेटवार्ता गर्नुभयो भने अमेरिकी गुप्तचर संस्थाका प्रतिनिधिलाई किन भेट्यो भन्ने ? त्यसो त अहिले अराजनीतिक लाञ्छना र प्रश्न उठाउने नेताहरुको पृष्ठभूमि पनि हामी हेर्न सक्छौँ । बिरामी भएर उपचारको बहानामा सिङ्गापुरमा कसकसलाई भेटिएको थियो, भनिरहनु पर्ला र रु प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो सिरक ओढेर घिउ खाने काम कहिल्यै गर्नुभएन । उहाँ निष्ठायुक्त, खुला र पारदर्शी राजनीति गर्दै यहाँसम्म आइपुग्नुभएको हो । त्यसकारण आङ कन्याएर छारो नटकटक्याउन म नेताहरुलाई आग्रह गर्दछु ।
पार्टीले महाधिवेशनको तयारी त गरिरहेको छ तर नेकपामा वरिष्ठ नेताहरु धेरै भएर तिनको व्यवस्थापनमा समस्या भएको पनि देखिन्छ, सँगसँगै पुस्तान्तरणको कुरा पनि आएको छ । दोस्रो पुस्ता कुनै गुटभन्दा माथि गएर नेतृत्व लिन तयार छ ? यो अबको बहसको विषय हो । तत्कालीन एमालेमा पार्टी वा सरकारको कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालसम्म रहन पाउने भन्ने विधि बनाइएको थियो । साथै सक्रिय राजनीतिका लागि ७० वर्षे उमेर हदबन्दी पनि थियो । विगतमा मैले नेतृत्व गरेको ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफन्टमा त ६० वर्षे उमेर हदबन्दी कार्यान्वयन भएको थियो । नेकपा गठनपछि ती प्रावधान हटाइए । अबका दिनमा पुस्तान्तरण गर्न जरुरी छ, दोस्रो पुस्ता तयार हुनुपर्छ । यसको छिनोफानो महाधिवेशनले गर्नेछ । रासस